पुरुषसत्ताको विरुद्धमा | मझेरी डट कम
editor — Sun, 07/31/2016 - 22:40
गाउँले जीवन र परिवेश भएपनि त्यस गाउँमा विकासका आधारभूत कुराहरू क्रमश सहज हुदैं गइरहेका थिए । बत्ती, सडक सञ्जाल र सूचना प्रविधिको राम्रो विकास भएको थियो, शिक्षा र स्वास्थ्यमा सबैको पहुँच पुगेको थियो । चुल्हो चौका गर्ने महिलाहरू पनि घरमै बसीबसी विश्वको कुन ठाउँमा के भइरहेको छ थाहा पाउने भइसकेका थिए परन्तु यति हुदाँहुदैं पनि महिलामाथि घरेलु हिंसा, यौनजन्य हिंसा र भेदभावपूर्ण व्यवहार कायमै थियो । विश्वमा नाम चलेका, ठूला भनिएका स्टार व्यक्तिहरूको जीवनकहानी, सेलीब्रेटीहरूको नयाँनयाँ सम्बन्ध, सम्बन्ध विच्छेद, प्रेम, रोमान्स अनि डेटिङ जस्ता कुराहरूसँग निरन्तर अपडेट भइरहने एक्काइसौं शताब्दीको समाजमा स्यारोन र साथीहरू शुक्रबारे छलफलमा यी र यस्ता नयाँ, रमाइला कुरा-घटनाहरूदेखि लिएर गाउँटोलमा दैनन्दिन घटित घटनाहरूको बारेमा भावी योजनाहरूको विषयमा समेत गहिरो छलफल, बहस गर्ने गर्दथे ।
"मैले अर्को बूढो यसैगरी यो घरमा लिएर आएकी भए तिमी के गर्थ्यौ भन त ?"
उसले रिस खप्न सकेन र पार्वतीको गालामा एक चड्कन जमायो ।
'यसलाई त एक नम्बरमै राख्नुपर्छ र यसैलाई प्रमुख माग बनाउनुपर्छ, यो हाम्रो एकसूत्रीय माग हुनुपर्छ । 'स्यारोन र निकिता दुवैले सही थापे ।
"तिम्रो दिमागमा यति सुन्दर र प्रभावकारी विचार कसरी आयो पार्वती ?" स्यारोनले सोधी ।
"प्रधानमन्त्रीज्यू, पुरुषले चाहिँ जतिवटा श्रीमती ल्याए पनि हुने, जेजे गरेपनि महिलाले सहनुपर्ने, सदियौंदेखि पुरुषबाट महिला ठगिदैं, शोसिदैं आएका छन् त्यसले चाहिँ यो समाज पथभ्रष्ट नहुने अनि एउटी महिलाले पुरुष सरह अधिकारको कुरा गर्दा पथभ्रष्ट हुने?तपाईंको त्यो पुरुषमैत्री आँखाको यथाशीघ्र शल्यक्रिया गर्नुस् महोदय" स्यारोनको कुरालाई साथ दिदैं निकिताले अँझ थपी"महिला भनेका को हुन्?तपाईंकी आमा, छोरी, दिदीबहिनी आदि चाहिँ महिला होइनन्?आफ्नी आमालाई बाउ सरहको अधिकार दिन किन खुट्टा कमाउनु भएको हजुरले ?"
ती दुई साहसी महिलाको कुरा सुनेर प्रधानमन्त्री नै दिग्भ्रमित भइरहेका थिए ।
"मैले त्यसो भन्न खोजेको होइन, पुरुषले दुई वा बढी श्रीमती ल्याउँदा उचित दण्ड जरिवानाको व्यवस्था छ नि त कानूनमा भन्ने मेरो आशय हो ।" उनले भने ।
"त्यत्रो वर्ष श्रीमानको दासीसरह भएर बसेकी महिला केही रुपैयाँ जरिवाना र केही समयको जेल सजायबाट आफ्नो अधिकार त्याग्न राजी होली जस्तो लाग्छ महाशय तपाईंलाई, अनि सजाय भुक्तान गरेर आएपछि जेठी श्रीमतीलाई दिने मानसिक यातना र हिंसाको बारेमा किन सोच्दैनन् पुरुषहरू, ठिक छ अब यसरी हुदैंन, हामी बाटो लाग्छौं तर तपाईं पुरुषहरूले एकदिन अवश्य झुक्नुपर्छ" निकिताले कुराको बिट मारी, दुवैजना त्यहाँबाट निस्केर हिडें ।
गाउँमा स्यारोन र निकिताको प्रतीक्षा भइरहेको थियो । उनीहरू पुगेपश्चात महिलाहरूमा छुट्टै जोश र हौसला बढ्यो । लाग्थ्यो निकिता र स्यारोनमा जादूमय शक्ति थियो । उनीहरूको साथमा हजारौं महिलाहरू थिए जसले आफ्नो आन्दोलन सफल नहुञ्जेलसम्म यौन हड्ताल गर्ने घोषणा गरे । केही दिनको तयारीपछि उनीहरू निर्णायक आन्दोलन गर्न राजधानी जान तयार भए । सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र ट्वीटरको पहुँच/प्रयोगले सूचना प्रवाह र आन्दोलनको तयारी तथा स्वरुपबारे जानकारी लिनदिन निकै सहज भएको थियो ।
यसबीचमा आन्दोलनको माग र औचित्य स्पष्ट पार्न महिला अधिकारकर्मी, मानवअधिकारवादी व्यक्ति तथा संघसंस्थाहरूसँग पनि छलफल, परामर्श समेत सम्पन्न गरियो ।
हप्तौंदेखि श्रीमानसँग सहवास गर्न छोडेर यौन हड्तालमा उत्रिएका महिलाहरूले निर्णायक आन्दोलनमा शहर जानुपूर्व आफ्नै घरका पुरुषहरूसँग अर्को चर्को आन्दोलन गर्नुपरेको थियो । 'छोरी बुहारी भएर घर छोडेर हिँड्ने हो?आफ्नो काम गर्ने खुरुक्क घरमै बस्ने'हरेक घरका महिलाले यस्ता खप्की खानुपरेको थियो । कतिपयले त 'घर छोडेर गएपछि फेरि फर्केर यो घरमा आउनुपर्दैन, आफ्नै बाटो लाग्नु'भन्ने धम्की पनि पाएका थिए ।
उनीहरू जुन उद्धेश्य र लक्ष्यका साथ आन्दोलनमा होमिएका थिए त्यो निकै उन्नतस्तरको अनि समय सापेक्षिक छ भन्ने उनीहरूको हृदयमा झंकृत भइरहेको थियो र त घरपरिवार र आफन्तका द्वेषपूर्ण पुरुषवादी सोचले ग्रस्त धम्की र दबाबलाई परास्त गरी आन्दोलनमा होमिन तम्तयार भएका थिए । महिलाहरू जुन आन्दोलनमा गइरहेका थिए त्योभन्दा कठिन घरकै आन्दोलन थियो, जहाँ बुबा, श्रीमान्, ससुरा र दाजुभाइहरूसँग शिर ठाडो गरेर हाकाहाकी बहस र उनीहरूको आग्रह अनि धम्कीपूर्ण भनाइलाई लल्कार्नुपरेको थियो । आफ्नो घरपरिवारका पुरुषहरूलाई जितेर अघि बढेका उनीहरूको जित सुनिश्चित जस्तै भइसकेको थियो किनकि आन्दोलनमा त दमनकारी पुरुषसत्ताका अत्याचारी परपुरुषहरूसँग लड्नुपर्थ्यो ।
पराईसँग लड्न आफ्नाहरूसँग लड्नभन्दा धेरै सरल हुन्छ ।
आन्दोलनको पहिलो दिन सयौं महिलाहरूले सिंहदरबारमा धर्ना र घेराउ गरे, सरकारले सामान्य वलप्रयोग र धरपकड गर्यो । 'तिमीहरूलाई कतिवटा पोइ चाहिए?हामी पनि छौँ है'जस्ता अपशब्द र दुर्व्यवहार गरे प्रहरी अनि प्रशाशनले । पत्रकारहरूले विभिन्न तरिकाले समाचार सम्प्रेषण गरे । अधिकांश सञ्चारमाध्यमले नकरात्मक तवरले विश्लेषण गरे भने केहीले मात्र यथार्थ र सही कुरा प्रसारण गरे यद्यपि फाइदा के भयो भने आन्दोलनले धेरैको ध्यान खिच्न सफल भयो ।
दिन बित्दै गए, आन्दोलन चर्किरहेको थियो । विभिन्न महिला अधिकारकर्मी व्यक्ति र संस्थाहरूले आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउन थाले ।
पाँचौ दिन आन्दोलनकारी महिलाहरू आन्दोलनको म‌ैदानमा त थिए तर अपशोच उनीहरू भोकोपेट थिए । घरबाट हिँड्दा आफूसँग भएको दुई चार सय रुपैयाँ बाटो खर्च र हिजोसम्म खाना खाँदा सक्किइसकेको थियो । उनीहरूले आन्दोलनको लागि भनेर कुनै चन्दा वा आर्थिक सहयोग संकलन गरेका थिएनन्, सायद संभव पनि थिएन । मनभरि आँट र छातीभरि जोश भएपनि खालीपेट भोकभोकै आन्दोलनको मैदानमा टिक्न मुस्किल भइरहेको थियो ।
त्यसको भोलिपल्ट स्यारोन, निकिता र पार्वतीले आन्दोलनमा होमिएका सहयोद्धा संगिनीहरूलाई भावपूर्ण सम्बोधन गर्दै आफूहरू महिला मुक्तिको लागि भोकभोकै भएपनि लड्ने तर माग पूरा नभएसम्म नझुक्ने, नफर्कने बताउँदै सहभागीहरूलाई गाउँ फर्कन र आआफ्नो ठाउँबाट आन्दोलनलाई सहयोग र समर्थन गर्न अनुरोध गरे । साथीहरूले फर्कन नमानेपछि घर गएर केही पैसाको जोहो गरेर पुन:आउन भनेर सम्झाइबुझाइ गरिसकेपछि भने उनीहरू घर फर्कन माने तर ललितमाया, मञ्जु, सरिता, पवित्रा, सीता लगायत पन्ध्र सोह्रजना महिला भने जति प्रयास गर्दापनि जान नमानेपछि स्यारोनहरूसँगै आन्दोलनमा क्रियाशील भइरहे । यो घटनालाई प्रमुख सञ्चारमाध्यमहरूले पनि प्राथमिकताका साथ स्थान दिए ।
उता सरकार भने 'पर्ख र हेर'को मनस्थितिमा थियो । अधिकांश आन्दोलनकारीहरू गाउँ फर्केपछि आन्दोलन शिथिल हुने विश्वासमा ढुक्क थियो परन्तु माग सम्बोधन गर्न महिला मन्त्रीले निरन्तर दबाब दिइरहेकी थिइन क्याविनेटमा ।
भोको पेटले आन्दोलन गरिरहेका महिलाहरूलाई त्यो बेलासम्म कतैबाट पनि खानापानी र आर्थिक सहयोग प्राप्त भएको थिएन जब उनीहरूले भोक हड्तालसहितको आमरण अनशन बस्ने घोषणा गरे तब पहिला मुख फर्काउनेहरू पनि जुस बोकेर पिलाउन आउन थाले तर ती चुत्था प्रयासहरू सबै असफल भए ।
महिला आन्दोलनमा स्वास्थ्यकर्मी, महिला प्राध्यापक, छात्रा विद्यार्थी, महिला वकिल र पत्रकाररूको पनि ऐक्यबद्धता आउन थाल्यो । क्याविनेटमा आफ्ना कुराको सुनुवाइ नभएपछि महिला मन्त्रीहरूले पदबाट राजीनामा दिएर आन्दोलनमा सहभागी हुन आए । आन्दोलनले नयाँ गति र उचाइ प्राप्त गरिरहेको थियो ।
अनशनको छैटौं, सातौं दिन र रातहरू क्रमशः बित्दै जाँदा आन्दोलनकारीहरू शारीरिकरुपमा प्रतिक्षण कमजोर र शिथिल हुदैं गइरहेका थिए, स्वास्थ्य अवस्था नाजुक हुदैं गइरहेको थियो ।
उता गाउँबाट फेरि महिलाहरू आन्दोलनमा सरिक हुन आउन थालिसकेका थिए भने पार्वतीको अवस्था चिन्ताजनक भइरहेको थियो । श्रीमानले सौता भित्र्याएदेखि नै उनको खानपिनको टुङ्गो थिएन । खानपान र आफ्नो स्वास्थ्यमा ध्यान नदिएकी तर आन्दोलनमा दत्तचित्त भएर सक्रियतापूर्वक खटेकी पार्वतीले आफ्ना साना छोरीहरू माइतीघर लगेर छोडेर आएकी थिइन् ।
शरीरमा एकमुठी सासमात्रै मुस्किलले अल्झिरहेको पार्वतीको अवस्था देखेर निकिता, स्यारोन र साथीहरूले अनशन तोड्न गरेको अनुरोधलाई हिम्मत नहारी एउटी महिलाको अदम्य साहसको परिचय दिइरहेकी थिइन् । सरकारका प्रतिनिधि र अन्य निकायहरूले गरेको आग्रहलाई पनि उनीहरूले अस्वीकार गरिदिए ।
राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरू र मानवअधिकारकर्मीहरूको भीड लाग्न थालेको थियो भने अनशनमा बस्ने महिलाको संख्या पनि ह्वात्तै बढिरहेको थियो । अनशनको सत्रौं दिनको निस्तब्ध रातमा उनीहरूको नजिकै एउटा हुचिल एकोहोरो हुहु अलापिरहेको थियो । मध्यरातबाट रातभर जसो कराएको त्यो हुचिल सूर्यकिरणले धरतीमा हाम नफाल्दै गायब भइसकेको थियो ।
स्वास्थ्यकर्मीहरूको एक समूह अनशनस्थलमा स्वास्थ्य परीक्षण गरिरहेको थियो । अनशनकारीमध्ये सबैभन्दा पाको उमेरकी ललितमायालाई परीक्षण गरेपछि डाक्टरको अनुहार अँध्यारो भयो । बुढेसकालमा अधिकार प्राप्तिको लडाइँमा अग्रपंक्तिमा खटेकी वीरङ्गनाले शहादत प्राप्त गरिसकेकी थिइन । त्यसैगरी पार्वतीलाई परीक्षण गरेपछ फेरि डाक्टरले शिर निहुर्याएर टक्क अडिए । पत्रकारहरूले प्रश्न तेर्स्याइहाले"उहाँको अवस्था कस्तो छ डाक्टर सा'ब ?"
डाक्टरको बोली घाँटीमै डल्लो परेर अड्किरहे झैं भएको थियो । सकिनसकी उनी बोलिन् "उनी अब अमर भइसकिन् ।"
यसो भनिरहँदा ती डाक्टरको आँखाबाट केही थोपा आँशु गालातिर दौडिरहेका थिए ।
पत्रकारहरूको हल्लाखल्लाले पार्वती र ललितमायाले सबैलाई छोडेर गएको कुरा क्षणभरमै चारैतिर फैलियो । आफू पनि अन्तिम अवस्थामा पुगेका स्यारोन, निकिता, सरिता, मञ्जु र पवित्रा लगायतका साथीहरूले आफ्ना सहकर्मीको बलिदानीमा भाव विह्वल भए, आँशुको भेल बगाए र आफूहरू पनि उनीहरू जस्तै हाँसीखुशी प्राण उत्सर्ग गर्ने प्रण गरे ।
उनीहरूलाई चिच्याएर काल्लिइकाल्लिइ रुन मन लागेको थियो तर आफै हलचल गर्न नसक्ने अन्तिम अवस्थामा जीवन बाँचिरहेका थिए ।
शान्तिपूर्ण आन्दोलन र अनशनमा बसेका महिलाको मृत्युको खबर क्षणभरमै संसारभर फैलियो । देशी विदेशी सञ्चारमाध्यम, सामाजिक सञ्जाल र चोकचोक, गल्लीहरूमा यसैको चर्चा हुन थाल्यो । सरकारलाई महिलाहरूको मागको उचित सम्बोधन गर्न राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रियरुपमा चौतर्फी दबाब बढ्न थाल्यो ।
नागरिक समाज, विपक्षी दलहरूले पनि महिला आन्दोलनको समर्थनमा विज्ञप्ति निकाले । संयुक्त राष्ट्र संघ अन्तर्राष्ट्रिय जगत र छिमेकी देशहरूले समेत महिला आन्दोलन र मागको सम्बन्धमा सरकारलाई धारणा स्पष्ट पार्न र उचित मागको सुनुवाइ गर्न आग्रह गरेपछि सरकार महिलाहरूसमक्ष झुक्न बाध्य भयो । मन्त्रीपरिषदको आकस्मिक बैठक बस्यो र महिलाहरूले राखेको माग पूरा गर्ने घोषणा गर्यो ।
खुशीयालीमा नाराजुलुस र र्याली निस्कियो र त्यो विजयी जुलुस आफ्ना प्रिय सहकर्मीहरू पार्वती र ललितमायाको शोकसभामा परिणत भयो । सहभागीहरूले उनीहरूको पार्थिव शरीरमा पुष्पगुच्छा र फूलमाला अर्पण गर्दै उनीहरूको पदचाप पछ्याउने बाचा गरे ।
पुरुषहरूले जन्मजात पाएको अधिकार महिलाहरूले जीवन उत्सर्ग गरेर, ज्यानको बाजि राखेर आन्दोलनको मैदानबाट दुईजना प्रिय सखी योद्धाको शहादतबाट प्राप्त गरेका थिए । जुन कुराको प्राप्तिका लागि ललितमाया र पार्वती लडे, जित पनि भयो तर त्यसको उपभोग गर्न भने पाएनन् ।
आन्दोलनको सफलतापछि सबै महिलाहरू आआफ्नो गाउँघर र कर्मथलोमा फर्के तर त्यति ठूलो सफलता र प्राप्तिमा पनि उनीहरूलाई केही गुमाए जस्तो, केही छुटेजस्तो भइरहेको थियो ।
'हामी खुशी छौँ तर यति पनि होइन कि हामीले सबथोक पाएका छौँ ! हो हामीले प्रिय मुक्तियोद्धाहरू ललितमाया र पार्वतीलाई गुमाएका छौँ र उनीहरूको मनोकांक्षा यो थियो कि अधिकार पाईयो भन्दैमा घरमा होस् या जीवनमा लोग्नेहरूको भीड लगाउने होइन किनकि हामी अत्याचारी पुरुष होइनौं । उनीहरूलाई हामी यो पुष्टि गर्न चाहन्थ्यौं कि यो सृष्टिमा, जूनघाम अनि धरतीमा उनीहरूको जति अधिकार छ त्योभन्दा लेशमात्र पनि हामी केहीमा कमी छैनौं र यो कुरा पुष्टि भइसकेको छ । अलबिदा ललितमाया र पार्वती, हामी सधैं सम्झिरहनेछौं । 'गाउँको सभा र सामाजिक सञ्जालमा स्यारोन र निकिताले यस्तै मर्मस्पर्शी कुरा राखे । सबै भावविह्वल भए, कसैका आँखा ओभाना रहेनन् । अन्य महिलाहरूले पनि आफ्ना मार्मिक, ओजपूर्ण र जोशिला भनाइ तथा विचार राखे । त्यत्रो दु:ख, संघर्ष र बलिदानीपश्चात प्राप्त गरेको अधिकार प्रयोग गर्न थालेपछि पुरुष सत्ता चकनाचुर भयो ।
अचेल महिलाले पनि मनपरेको पुरुषसँग बिहे गर्ने, मन नमिल्दा पारपाचुके गर्ने अनि फेरि मनमिल्दो साथी खोजेर घरमै ल्याएर राख्न थालेका छन् । खाना काउने, खुवाउने, लिपपोत, सरसफाइ, चुल्होचौको, लुगा धुने र बच्चा स्याहार्ने जस्ता काम महिलालेभन्दा पुरुषले बढी गर्न थालेका छन् किनकि उनीहरूलाई आफ्नी श्रीमतीले कतिबेला घरबाट निकाल्छिन् भन्ने डर छ । अहिले त्यहाँ नारीसत्ता स्थापना भएको छ ।
कथाकार: कुमार काफ्ले